REENOEMANN: အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်
ကျနော် ချစ်ခင်ရသော မောင်နှမများ အားလုံးကို သိရှိစေရန်
မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလောက က ဒီမောင်နှမတွေ အားလုံးကို ကျနော် ချစ်ခင်ရပါတယ်။
ခုတော့ မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ခဲ့ကြသလို မမျှော်လင့်ပဲ ကျနော် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
စိတ်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကျနော် အနေနဲ့ လိုက်လုပ်နေမိတဲ့ ကျနော်ကိုလည်း ကျနော် မုန်းနေမိပါတယ်။
နောက်တစ်ချိန် ဘာဖြစ်မယ် ဘာဖြစ်အုံးမယ်ဆိုတာ မသိသေးတဲ့ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခု အတွင်းပေါ့။
ဒီ တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်တော့ ကျနော်ဘလော့ဂ်ကို ဖွင့်ထားပါမယ်။ နောက်လာမဲ့ ရက်တွေမှာတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်
လည်း ဘာမှ မသိသေးပါဘူး။ အခုတစ်လော လည်း ဘာလုပ်လုပ် အဆင်ပြေတယ်ကို မရှိဘူး။
စိတ်လည်း ကုန်တယ်။ အစား မတော် တစ်လုပ်၊ အသွားမတော် တလှမ်း အပြောမတက်တော့ ဆဲ သလိုဖြစ်သွားခဲ့
တဲ့ ကျနော့် ကိုယ် ကျနော်ပဲ အပြစ်တင်နေမိပါတော့တယ်။
ဘလော့ဂ်မှာ ခင်ကျ အပြင်မှာ တွေ့ဖူးကျတဲ့ ကျနော့် မောင်နှမ များ အားလုံး အပေါ် ကျနော အနေနဲ့ ပြောမှား
ဆိုမှားရှိခဲ့ရင် ဒီနေရာ ဒီပိုစ့်လေးကနေ တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။
ကျနော်တို့တွေ ကံပါအုံးမှာပါ။ ပြန်တွေ့ကျတာပေါ့နော်။
စုံစမ်း မေးမြန်းခြင်း သီးခံပါ။
Posted by Ree Noe Mann at 10:35:00 PM
ဒါနဲ့ဆို ဒုတိယ အကြိမ်ပဲ
ကိုရီနိုရေ.. ဘယ်လိုလဲဗျာ.. ကိုသီဟသစ်က ဒုတိယအကြိမ်ပါဆိုပေမယ့်...ကျွန်တော်အတွက်က ပထမအကြိမ်ပါ။ အခုတစ်လော ဘာတွေ ဖြစ်နေကြတာလဲမသိဘူး.။ ဆိုးရွားတဲ့ နက္ခတ်တွေ စုပုံနေပါလားဗျာ။
ဘာတွေ ဖြစ်လို့တုန်း ...
အကို သတ္တိ၊ ဇွဲ ၊ ခံနိုင်ရည် ရှိတာ သိပါတယ်။
ငွေမရဘဲ အချိန်ကုန်ခံပြီးရေးရတာတောင် အတိုက်အခိုက်က များတယ်ကွ ...။
ငါလည်း စိတ်ရှုပ်လာရင် ပိတ်လိုက်တော့မယ်။
ချနင်းပြီး တက်ဘို့ပဲ စဉ်းစားချင်နေကြတယ်...။
စိတ်ပျက်ဘို့ကောင်းတဲ့လောက ကို စွန့်ခွာမယ်ဆိုလည်း အပြစ်တော့ မပြောပါဘူးကွာ...။
ဘလော. လောကလည်း အရောင်တွေများရောလာ
ပြီလား အကိုရာ ???????????? ကျွန်တော်
အစ်ကို နားပါဦးဗျာ ဘလော့တော့မပိတ်ပါနဲ့ဦး အဆင်ပြေမှာပါ အဆင်ပြေသွားမှာပါ စိတ်အေး လက်အေး စဉ်းစားပါအစ်ကိုရာ နော် .....
တွေ့ပြန်ပါပြီ ဘလော့ပိတ်မဲ့ တယောက်၊ ဘာတွေ ဖြစ်ပြန်ပီလဲ၊ ခုပဲ ၉ လပိုင်းရောက်တော့မယ်၊ စာရေးတာ ကို တာဝန်ကြီး တခုလို မထားပဲ ၊ စိတ်ထွက်ပေါက်လေးတခုအနေနဲ့ ထားပြီး ရေးပါလေ၊ မရေးနိုင်ရင် ခန နားနေပေါ့၊ ကိုယ့်ရင်ထဲက အကြောင်းတွေ ဗဟုသုတတွေ မျှဝေနေကြတာပဲ ၊ အားလုံးနားလည်ကြပါတယ်၊ ခက်တာပဲ
ရော် အခုတလော ဘလော့ဂ်ဂါတွေ ဘာဖြစ်နေတုံး
ကိုရီနိုရေဘာဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေ ပါစေကွယ် ပြေမှာပါ အစ်ကို မိဘ ကိုသိတတ်တဲ့ သားလိမ္မာပဲဟာနော်
အကိုအမများကို တောင်းပန်ပါသည်။ မလုပ်လိုက်ကြပါနှင့်။
ကိုရီနိုကြီး ကော အပေါ်မှ ခြိမ်းခြောက်သွားသော ကိုကြီးမြစ်ကောနော်။
( လူကြီးလေး ခနလုပ်ခွင့်ပြုပါ )
ဘာလို့ များ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒီအတိုက်အခံတွေအတွက် စိတ်ရှုပ်ခံမလဲ ဟင်။
သမီးဆို အရေးအားသာတဲ့သူ မဟုတ်လို့အကိုအမတွေဆီကပဲ ဗဟုသုတ၊ သင်ခန်းစာ၊ ပျော်စရာ၊ ရယ်စရာ၊ ပညာတွေ အများကြီး ယူနေတာလေ။ မကောင်းကင်ပြောသလို ဘလော့က အားရင်ရေး၊ ဖီလင်လာရင်ရေး၊ အားရင်လည်၊ မအားရင်ခနပစ်ပေ့ါ။ ရင်ဘတ်ထဲက ခံစားချက်တွေ သွန်ချတဲ့ တို့ တွေရဲ့ ပျော်စရာ ဂိုဒေါင်လေးတွေပါ အကိုတို့ အမတို့ ရာ။ အဲဒီဂိုဒေါင်လေးထဲမှာ တို့ရဲ့ တူညီတဲ့ အမြင်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေ၊ ရင်ခုန်သံတွေ ရှင်သန်နေရမယ်လေ။ ဂိုဒေါင်ထဲက အပုပ်တွေ လွင့်ပစ်ကြမယ်ဗျာ။ လေကြောင့်ဘယ်ကျောက်ဆောင်မှ ရွေ့ မသွားဘူးတဲ့နော်။ ငယ်ငယ်က အဖေပြောခဲ့ဖူးတယ်။
နားနားပြီး ရေး၊ နားနားပြီး လည်၊ ကြတာပေါ့။
အနားယူပါ ကိုကြီးရာ။။။ စိတ်လေး အေးသွားရင်ပြန်ရေးနော်။ ဒါပဲ။
နာ့က ဘာပြောရမှာတုန်းး) စိတ်ညစ်နေတာလား အခုက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့လေးနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ဘူးထင်တာပဲလေ.. ဒီတော့ ဘလော့လေးကို ဒီအတိုင်းထားခဲ့ စိတ်ညစ်တာတွေ ပျောက်သွားရင် ပြန်လာရေး။ ပိတ်တော့မထားခဲ့နဲ့ ဟုတ်ပြီလား တော်ကြာ ပြန်ရေးချင်ရင် ဒုက္ခဖြစ်နေဦးမယ် ကျနော်ဆို ဒီအတိုင်းပဲ ထားထားလိုက်တာပဲ ရေးချင်မှရေးပေါ့ ဒါလေးဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ် ကိုယ်ပွားလေးမလား။ ဒီတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်သလိုလုပ်း) ဖျက်လိုက်စရာမလိုပါဘူး ဒီအတိုင်းထားခဲ့လိုက် အနားယူလိုက် ပြီးတော့လဲ စိတ်က ပြန်ကောင်းသွားရော.. လူဆိုတာ ရတာမလို လိုတာမရမလား ဘာမှ စိတ်မညစ်နေနဲ့တော့ ထားခဲ့ အားရင် စိတ်ပျော်ရင် ပြန်လာရေး ဒါပဲး)
ဘလော့ ပိတ် ပြစ်ဖို့ ထိတော့ မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ စိတ်ရှုပ်တုန်း ခဏတော့ ပစ်ထားလိုက်ပေ့ါ.... စိတ်ပါလာရင် ပြန်ရေးလေ...။ အေးဆေးပါနော်... ခု မပြေလည်တာတွေဟာ ခဏနေ ရီစရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...။ ကိုယ့်ဘလော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရေးချင်စိတ်မရှိသေးလို့ မရေးပဲ ထားပါတယ်လို့ စာတမ်းလေးပဲ ချိတ်ထား...။ မပိတ်ပစ်ပါနဲ့နော်..။ မအိမ်ကံ လဲ ဆုံးခန်း မတိုင်သေးဘူးး)
လုပ်လိုက်စမ်းပါ ပိတ်ထားလိုက် ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ကြာကြာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက် ပေါက်ကွဲလိုက် ဟုတ်ပြီလား တွေ့ ဆုံကြုံကွဲဖြစ်မြဲပါပဲ အဟတ် လာတဲ့လူရှိရင် သွားတဲ့လူရှိမယ် ကိုယ်မရှိရင် ကိုယ်နေရာလာမယ့်လူရှိတယ် ဒီတော့ ကိုရီနို ပေါက်ကွဲလိုက်စမ်းပါ
သွားချင်တာသွား ထားချင်တာထား နေချင်သပဆိုလည်းနေ မနေချင်သပ ဆိုလည်း ထားခဲ့လိုက် နောက်ဆံမတင်းနဲ့ ဟုတ်ဘူးလား
အနော့လည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်နေတာ တောင်ပေါ်သားပြောသလိုပဲ အဟတ် တောင်ပေါ်သားအဆို နောက်ကနေထောက်ခံတယ်ကွာ
ကိုရီနိုကြီး ဘလော့တော့ပိတ်မပြစ်ပါနဲ့.. ရေးချင်တဲ့အခါပြန်ရေးပေါ့..စိတ်ညစ်နေရင် အားလုံးကို ခဏမေ့ထားလိုက်..အိုကေသွားလိမ့်မယ်..
မအိမ်ကံ ( for Aug ) အပိုင်း - ၇
မအိမ်ကံ ( for Aug ) အပိုင်း - ၆
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ခရီးစဉ် (စ /ဆုံး)
မအိမ်ကံ ( for Aug ) အပိုင်း - ၅
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ခရီးစဉ် (သိမ်း)
မအိမ်ကံ ( for Aug ) အပိုင်း - ၄
ခုတလော (တက်ခ့် ပိုစ့် )
မအိမ်ကံ ( for Aug ) အပိုင်း - ၃